Madaxweyne hore Xasan Sheekh oo kulamo siyaasadeed ka wada Kismaayo • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Jubaland / Madaxweyne hore Xasan Sheekh oo kulamo siyaasadeed ka wada Kismaayo
Madaxweyne hore Xasan Sheekh oo kulamo siyaasadeed ka wada Kismaayo
Magaalada Kismaayo waxaa kulan ku leh madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo masuuliyiinta ugu sar sareysa maamulka Jubaland.
Kadib safar uu maanta ku tagay magaalada Kismaayo xildhiban Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu kulamo kala duwan Kismaayo kula qaato madaxda Jubaland gaar ahaan madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Madoobe.
Si dhab ah looma oga kulamadan iyo waxa ay salka ku hayaan hase ahaatee madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ujeedka uu u tagay Kismaayo lagu qeexi karaa mid siyaasadi ay ka dambeyso.
Sawiro lasoo galiyay baraha bulshada iyo website-yada Soomaalida ayaa muujinayay soo dhaweyn Xasan Sheekh loogu sameynayo garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xildhibaan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xiligan kamid ah xubnaha sida maldahan u mucaaradsan siyaasada dowlada iminka talada haysa ee madaxweyne Farmaajo,waxaana horey isaga iyo xubno si weyn u mucaaradsan dowlada Nabad iyo Nolol ay sameysteen xisbi u gaar ah kaasoo ay ugu magac dareen Xisbiga Nabada iyo Hormarka.
Si kastaba Booqashada Xasan Sheekh madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu ku tagay Kismaayo ayaa u muuqata mid tuhun badan ku abuuraysa dowlada iyo siyaasiyiinta la dhacsan hogaanka ugu sareeya dalka lamana oga waxa kasoo bixi kara kulamada siyaasadeed ee uu Xasan ka wado Kismaayo xili la ogyahay in uu xun yahay xiriirka dowlada iyo dowlad goboleedyada.
Hase ahaatee horey ayuu madaxweynihii hore ee Soomaliya Xasan Sh Maxamuud u sheegay in uu safaro la xiriira isxog wareysi ku kala bixin doono deegaanada dowlad goboleedyada.